नेकपा धादिङको चौथो पूर्ण बैठक धादिङवेशीमा सम्पन्न - Pradesh Hub
२०७८ साल कुन राशि को लागि कस्तो ? हेर्नुहोस् बार्षिक राशिफल
१ बैशाख २०७८, बुधबार १०:५४
घर घरमा खानेपानी आए पछि गजुरी पिडाबासीमा खुशीयाली
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार २२:२४
प्रतीक्षा र सुधिरको “घुम्तिमा रेल” सार्बजनिक
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार २०:२६
धादिङको धुनिवेशीमा आज देखि १० औं राष्ट्रपति रनिङ शिल प्रतियोगिता शुरु
२९ चैत्र २०७७, आईतवार १९:३७
ट्रिपर व्यवसायिको निर्वाचन : माओबादी केन्द्रका दिल ब. श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित
२९ चैत्र २०७७, आईतवार १४:०४
पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेशमा विपुल पोखरेलको प्यानल विजयी
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार २१:५१
पत्रकार महासंघ धादिङको अध्यक्षमा राजाराम शर्मा को प्यानल बिजयी
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १०:२४
वैचारिक रूपमा बागमती सरकार अल्पमतमा: शालिकराम जम्कट्टेल
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार २२:१७
बागमतीमा माओवादी केन्द्र सशक्त प्रतिपक्ष
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार १०:३१
मौसम प्रतिकूलताको कारण देशभरका विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय
१६ चैत्र २०७७, सोमबार १६:१६
नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन
१४ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:००
माओवादी केन्द्र स्थायी समितिको बैठक बस्दै
१० चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:५७
धादिङको मलेखु बजारमा डिजिटल कारोवार, कुमारी बैंकले वितरण गर्यो QR कोड
१० चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:५०
गजुरी गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभा सम्पन्न
१० चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:०२
सिकाई उपलब्धि बृद्धिको लागि प्रयास नेपालको सहकार्यमा शैक्षिक सुधार अभियान गर्दै गजुरी गाउँपालिका
८ चैत्र २०७७, आईतवार ०६:२३
नेकपा धादिङको चौथो पूर्ण बैठक धादिङवेशीमा सम्पन्न
११ पुष २०७७, शनिबार १८:५० प्रकाशित
धादिङ पुस ११ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) धादिङको चौथो पूर्ण बैठक आज सम्पन्न भएको छ । नेकपाका केन्द्रीय नेता राजेन्द्र पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा बैठक सम्पन्न भएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) धादिङको चौथो पुर्ण बैठक तथा कार्यकर्ता भेला जिल्ला इन्चार्ज शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । शनिवार सम्पन्न भेलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलिले चलेका राष्ट्रघाति कदमले देश र जनतालाई ठुलो क्षति पुगेकोनिष्कर्ष निकाल्दै खेद व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो छ निर्णय हरु :
१ के.पि. ओलिको असम्बैधानिक कदम (प्रतिनिधि सभा बिघटन) को निन्दा र खेद ब्यक्त ।
२ १३ ओटै पालिका कमिटी बैठक ,वडा कमिटी बैठक र संघर्षमा जनपरिचालन गर्ने ।
३ सबै जनवर्गिय संगठनहरुको भेला/बैठक सम्पन्न गर्ने
४ के.पि. ओलिको असम्बैधानिक कदमका बिरुद्ध पौष १४ गते काठमान्डौं जाऔं अभियानमा जनपरिचालन गर्ने ।
५ पार्टी केन्द्रले निर्देशित गरेका संघर्ष र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने । स्थानिय तहका वडा सम्म विरोध तथा संघर्ष का कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको नेकपा धादिङका सचिव विजय बुर्लाकोटीले बताउनु भयो । भेलामा ओलि निकट सदस्यहरुको उपस्थिति थिएन भने आजको भेलामा नेताहरु गंगालाल तुलाधर, पुष्पविक्रम मल्ल, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रामबहादुर भण्डारी लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
११ पुष २०७७, शनिबार १८:५० मा प्रकाशित
२०७८ साल कुन राशि को लागि कस्तो ? हेर्नुहोस् बार्षिक राशिफल राशी
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) २०७८ सालमा मेष राशि हुनेहरूका लागि शुभदायी नै रहनेछ । बृहस्पति र शनिको अनुकूलताले वर्ष भरिनै भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । शुभ र मङ्गल कार्यको योग पनि रहनेछ । व्यवसायीक सन्दर्भमा नयाँ व्यक्ति र नयाँ कम्पनीसँग आवद्ध भइनेछ । सन्तान सुख पनि मिल्नेछ । वैदेशिक यात्रा हुनेछ, तर विश्वासिलो व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा नचाहँदा नचाहँदै चिसोपना आउनसक्छ । व्यापार/व्यवसाय यो वर्ष व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नु नपरेपनि त्यति राम्रो नहुने र ऋण बढ्न सक्छ । खानेकुरा, पर्यटक र दलाली कारोबार त्यति राम्रो रहने छैन । शेयर बजारमा लागेकाहरूलाई समय निकै राम्रो थप यता